Ikhadi Lomhlaba wonke kanye ne-Cryptocurrency etholakala ngamahlelo amancane: olunye uhlobo olusha lwe-Winci
-Izinsuku eziyi-10 ukufika kwe-Winci eMessina
TholaWeb, njengoba Inxusa leWinci, qhubeka nokulandela zonke izindaba zalesi sigaba esinamandla. Futhi ngenkathi kulindwe umcimbi kaNovemba 16th kuya I-Palacultura di Messina ikhula, sembula okuthile okwengeziwe ngayo Ikhadi Lomhlaba Wonke.
- Abangu-5 emcimbini weWinci eMessina: imininingwane ewusizo yabangenele
Imininingwane ewusizo yokuhlala edolobheni phakathi nomcimbi
Ngenkathi umshini wenhlangano ozolethaUmcimbi weWinci a Messina kugcwala ngokugcwele, izindaba eziningi ziya zivezwa kuphrojekthi. I-TrovaWeb enakekela inhlangano yosuku lwe-Messina, ihlinzeka bonke ababambiqhaza abaphuma ngaphandle kwedolobha lonke ulwazi oluwusizo lokuthi bangahlala kuphi futhi badle kuphi.
Ikhadi Lezipho Lomhlaba Wonke: i-cryptocurrency elula yawo wonke umuntu
- Abangu-3 emcimbini we-Winci: Amakhadi weGlobal asevele efuna kakhulu
Ukubalwa komcimbi Winci al I-Palacultura di Messina sekuzophela. Manje sebeyedwa Izinsuku ze-3 kuya kuNovemba 16, usuku ukusebenza kwe Ikhadi Lezipho Lomhlaba Wonke kanye nolunye ulwazi oluningi olujikijela ngomjikelezo Winci.
-1 emcimbini weWinci eMessina: siyabazi abaklami bephrojekthi
EPalaCultura konke sekumi ngomumo esiteji seSicilia seWinci AWR
Saxoxa kakhulu criptovalute, imibuthano yabathengisi, ukuthembeka kwamakhasimende, izikweletu, amakhuphoni, izinhlobo zamazwe omhlaba namandla okuthenga. Konke lokhu kufingqiwe kuphrojekthi eyodwa: I-WINCI AWR. Futhi isikhathi sesifikile sokuthola okuningi mayelana nabadali bezinyathelo.